Ilungelo eliPhezulu ngokuSekwa ​​koMandla
Xa ngabaMongameli be-Stonewall Congress
Ilungelo elilawulayo ligunya elithathwa nguMongameli waseMelika kunye namanye amagosa egosa elilawulayo likarhulumente ukuba angabambeleli kwiCongress , inkundla okanye abantu ngabanye, ulwazi oluceliwe okanye oluchaziweyo. Ilungelo eliphambili liphinde lenziwe ukuba likhusele abasebenzi basebe sebe okanye amagosa ekungqineleni kwiintlanganiso zeCongress.
Umgaqo-siseko wase-United States akenzi nto ikhankanywe ngamandla eNkongolo okanye enkundleni zombuso ukucela ulwazi okanye umgaqo wecandelo elilawulayo ukwenqaba ezo zicelo.
Nangona kunjalo, iNkundla ePhakamileyo yase - US iye yawulawula ukuba ilungelo elilawulayo lingaba yinto esemthethweni yokuhlukaniswa kwemfundiso yamandla , ngokusekelwe kumagunya omgaqo-siseko wegatsha elilawulayo ukulawula imisebenzi yalo.
Kwimeko yeUnited States v. Nixon, iNkundla ePhakamileyo iqinisekisile imfundiso yecala elilawulayo kwimeko yokunikwa kweenkcukacha ngolwazi olukhutshwe liSebe lezomthetho , endaweni yeCongress. Kwimbono yenkundla ininzi, uMgwebi oyiNtloko uWarren Burger wabhala ukuba umongameli unelungelo elifanelekileyo lokufuna ukuba iqela elifuna amaxwebhu athile kufuneka lenze "ukubonakaliswa okwaneleyo" ukuba "izinto zokongameli" "zibalulekile ebulungiseni kwimeko." UBurger Berger wachaza ukuba ilungelo lomongameli liza kuba livumelekile xa lisetyenziswe kwiimeko xa ulawulo lwegqeba luza kuphazamisa ukuba i-executive executive capacity to address the concerns of national security.
Izizathu zokubasa iGosa eliPhezulu
Ngokomlando, abaongameli baye basebenzisa ilungelo elilawulayo kwiintlobo ezimbini zamatyala: ezo zibandakanya ukhuseleko lwesizwe kunye nezo zibandakanya uxhulumaniso lwesebe.
Iinkundla ziye zalawula ukuba oomongameli banokusebenzisa ilungelo elilawulayo kwiimeko ezinxulumene nophando oluqhubekayo ngokunyanzeliswa komthetho okanye ngexesha leengxoxo ezibandakanya ukuvezwa okanye ukufunyanwa kwimiba echaphazelekayo ebandakanya urhulumente wephondo .
Njengoko iCongress kufuneka ibonise ukuba inelungelo lokuphanda, isebe elilawulayo kufuneka liqinisekise ukuba linesizathu esilungileyo sokubamba ulwazi.
Nangona kukho iinzame kwiCongress ukuba idlulise imithetho ngokucacileyo ngokucacisa ilungelo lokulawula kunye nokubeka izikhokelo zokusetyenziswa kwayo, akukho mthetho onjalo oye wadlulela kwaye akukho namnye onokukwenza esikhathini esizayo.
Izizathu zoKhuseleko lweSizwe
AbaMongameli baninzi bafuna ilungelo elilawulayo lokukhusela ulwazi olukhuselekileyo lwezempi okanye lwezopolitiko, oluya kuthi luchaziwe, lunokubeka ukhuseleko lwe-United States engozini. Njengoko umlawuli womgaqo-siseko njengomlawuli kunye nomphathi we-US Military, le "yimfihlelo karhulumente" ibango lelungelo elilawulayo alisoloko licelomngeni.
Izizathu zoLawulo loLwazi lweSebe
Uninzi lweengxoxo phakathi koongameli kunye neengcebiso zabo eziphezulu kunye nabacebisi babhalwa okanye babhalwa ngekhompyutha. AbaPhathiswa baye baphikisa ukuba ilungelo lokugcina isisitheko kufuneka longezelelwe kwiirekhodi kwezinye zezo ncoko. Abaongameli baphikisana ukuba ukuze abacebisi babo bavuleke kwaye banikezele ukunika iingcebiso, kwaye banikele zonke iingcinga ezifanelekileyo, kufuneka bazive bekhuselekile ukuba iingxoxo ziya kuhlala ziyimfihlo. Olu hlelo lwesigqeba esilawulayo, ngelixa linqabile, lihlala liphikisana kwaye lidlalwa umngeni.
Kwimeko yeNkundla ephakamileyo ye-1974 ye- United States v. Nixon, iNkundla yavuma "imfuno efanelekileyo yokukhusela unxibelelwano phakathi kwamagosa aphezulu aphezulu kunye nabo bacebisa kwaye bancedise ekwenzeni imisebenzi yabo emininzi." Inkundla yaqhubeka ithi "u-[h] uman amava afundisa ukuba abo balindele ukusabalaliswa koluntu ngamazwi abo kunokubangela ukukhathazeka ngokubonakalayo kunye neminqweno yabo ngokwenza umonakalo wenkqubo yokwenza isigqibo."
Nangona iNkundla yavuma ngoko imfuneko yokugcina imfihlo kwiingxoxo phakathi koomongameli kunye nabacebisi babo, yalawula ukuba ilungelo lamongameli ukugcina ezo ngxoxo ziyimfihlelo phantsi kwebango le lungelo elilawulayo alizange lilungele, kwaye lingatshintshwa ngumgwebi. Kwimbono yobuninzi beNkundla, uMgwebi oyiNtloko uWarren Burger wabhala wathi, "[n] nokuba imfundiso yokwahlukana kwamagunya , kwaye akukho mfuneko yokugcina imfihlo yonxibelelwano oluphezulu, ngaphandle kweminye, inokugcina ilungelo elingamkelekanga likaMongameli lokuzikhusela kumgwebo kwinkqubo phantsi kwazo zonke iimeko. "
Isigwebo sagunyaza izigqibo ezivela kwiimeko zamatyala ePhambi kweNkundla ePhambili, kuquka uMarbury v. Madison, ukuseka ukuba inkqubo yenkundla yase-United States isigqibo sokugqibela semibandela yomgaqo-siseko kwaye akukho mntu, kungekhona nomongameli wase-United States, ongaphezu komthetho.
Imbali emfutshane yoLungelo loLawulo
Ngoxa u- Dwight D. Eisenhower wayengumongameli wokuqala ukusebenzisa igama elithi "ilungelo elilawulayo," wonke umongameli ukususela eGeorge Washington usebenzise uhlobo oluthile lwamandla.
Ngomnyaka we-1792, iCongress yafuna ulwazi kuMongameli Washington malunga nokuhambela kwezempi kwe-US. Kanye kunye namarekhodi malunga nokusebenza, iCongress yabiza amalungu e-White House ukuba avele kwaye afake ubungqina obufungelweyo. Ngengcebiso kunye nemvume yeKhabinethi yakhe, Washington yagqiba ekubeni, njengomphathi ophezulu, wayenegunya lokunqanda ulwazi kwiCongress. Nangona ekugqibeleni wagqiba ekubeni asebenzisane neCongress, Washington yakha isiseko sokusetyenziswa kwexesha elizayo.
Enyanisweni, iGeorge Washington isetyenziswe umgangatho ochanekileyo kwaye uhlonishwa ngoku ngokusebenzisa ilungelo elilawulayo: Ufihlelo lukaMongameli kufuneka lusetyenziswe kuphela xa lusebenza kumdla woluntu.
Imbali yeSatellites-Sputnik I
Iingoma ezimbini zeeNgoma ezazingamaBig Hits